Otu esi eto eto anu osisi shititite n'ulo, iwu nke nchịkọta - Mkpụrụ ubi - 2020
Otu esi eto shititite n'ulo
Shiitake mushrooms nwere uto magburu onwe ya, yana mmetụta bara uru na ahụike na àgwà dị mma.
Iji nweta mushrooms ndị kasị baa uru ma dị elu nke ụdị a, ọ dị mkpa iji nlezianya na echebara echiche banyere nsogbu ha na-akọ.
Ụzọ ndị na-eto eto Shiitake
Usoro sara mbara
Njikere ihe nro
Ịgba egwu na ịnakọta
Video: Shiitake - esi eto mushrooms, mkpụrụ na agha
A na-ewere Shiitake otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị ewu ewu n'ụwa, ọ bụghị naanị n'ihi ọrụ ya na-ahụ maka ọgwụgwọ, kamakwa n'ihi àgwà ọma ya. Ngwurugwu a na-eri ihe dị oke mma maka ịkwadebe ihe oriri na-esi ísì na ọbụna ṅụọ.
Ngwurugwu nwere okpokoro na-acha aja aja nke nwere nkwụsị nke 4 ruo 22 cm nke nwere ihe mgbakwunye pụrụ iche. Shiitake nwere eriri ụbụrụ, na ndị na-eto eto nọchitere akụkụ ahụ a na-enyekwa ogwe pụrụ iche nke na-echebe akụkụ ndị ahụ n'oge oge ịkọ chara acha. Mgbe nkwonkwo ahụ dị njikere, akpụkpọ ahụ na-agbaji ma nọgide na-adị n'ụdị "ọkpụkpọ anụ" n'elu okpu. Ndị eze ukwu China ṅụrụ mmanya dị mma nke ndị a na-eme ka ha dị ogologo oge ntorobịa ha, ya mere, n'ọtụtụ mba Asia, a na-akpọ shiitake dị ka "ero ndị eze." Ala nna nke osisi a bụ ọhịa nke China na Japan, ebe ọdịbendị na-agbasa na kporo osisi hardwood.
Ị ga-achọ ịma ihe mushrooms na-eto na osisi na stumps.
Ihe odide caloric nke ngwaahịa a dịtụ ala - 34 kcal kwa 100 grams nke ibu arọ. Akwụsịghị nke a na-esite na shititake, n'ihi na ọdịnaya caloric ha dị ihe dịka 300 kcal kwa 100 gram.
Site n'echiche nke uru bara uru, onye nnọchianya nke mushrooms bụ ihe dị adị, n'ihi na ọ nwere nnukwu zinc, nnukwu carbohydrates dị mgbagwoju anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndepụta zuru ezu nke amino acids, yana leucine na lysine n'ụdị zuru ezu. Site n'enyemaka nke mmiri shiitake, ị nwere ike belata ọkwa cholesterol n'ime ahụ, yana belata shuga shuga ma merie allergies. Ọzọkwa, iri nri nke a na ụdị mịrị amị pụrụ inye aka n'ịgwọ ọrịa ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa imeju.
Ị ma? Nri nke nsị nwere ike ichere maka ezigbo ohere maka germination ruo ọtụtụ iri afọ. N'okwu a, ọnọdụ ihu igwe dị mkpa nwere ike ịghọta nsogbu ahụ na ebe ndị a na-atụghị anya ya: na nkwụsịtụ, akpa ọka, mgbidi ma ọ bụ ebe ọzọ.
Ngwaahịa ahụ nwere ụfọdụ ihe ize ndụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ọrịa na-efe efe, a ghaghị ilezi anya na oriri nke shiitake. Nakwa, erila ero a n'oge ịkọ nwa na afọ ime (ngwaahịa a gụnyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndị na-arụ ọrụ na mmiri).
Ụdị ihe dị iche iche nke a na-ahụ maka akụrụngwa ndị na-eto eto, nke na-arụsi ọrụ ike na akụkụ nke osisi na-anwụ anwụ mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa. Ndị na-eto eto na-egosiputa ihe na-emetụ n'ahụ nke ịkụ mkpụrụ nke akụkụ ahụ - dịtụghị ngwa ngwa nke mycelium, yana àgwà ndị na-asọmpi na mgba maka ndụ n'ime ọhịa (ma e jiri ya tụnyere ógbè nke ebu na nje bacteria).
Gụọ banyere ihe mycelium bụ na otu esi eto ya n'ụlọ.
Ma na imezu usoro nile dị mkpa na-eto eto na ịnọgide na-adị ọcha zuru oke n'oge ọ bụla, ọ ga-ekwe omume ị nweta nnukwu ihe ubi buru oke mgbalị.
E nwere ụzọ abụọ dị mkpa isi zụlite mushrooms ndị dị na mbara ala: ọtụtụ na kpụ ọkụ n'ọnụ.
Ọ na-adabere n'ịdị na-eṅomi usoro ihe ọkụkụ nke ero na osisi. N'ihi nke a, a na-egbute kporo nke osisi ndị kwesịrị ekwesị na nke mgbochi na n'ụzọ pụrụ iche ha na-etinye aka na olulu mmiri nke shititite. Usoro a ga-eweta nsonaazụ kachasị mma na mpaghara na ọnọdụ kwesịrị ekwesị (okpomọkụ na iru mmiri).
A na-ahụ ọkwa mkpụrụ osisi kachasị elu n'afọ nke abụọ nke iwebata mycelium n'ime osisi ihe onwunwe. Ugbu a, ihe dị ka pasent 70 nke mmepụta ihe nke ụwa na-emepụta ihe ndị dị na shitit dabeere na usoro a.
Ọ na-adabere n'iji mkpụrụ a kwadebere n'ụzọ pụrụ iche site na ibe, osisi nke osisi deciduous, ahịhịa nke ọka wit na mgbakwunye ọka, bran, hay ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ịnweta. Ngwakọta a ga-edozi ma ọ bụ pasteurized nke ọma, mgbe nke a gasịrị, a ghaghị itinye mycelium nro na mkpụrụ. Mgbe oge ụfọdụ gasị, ịchịkọta zuru oke nke ihe ndọtị ahụ na-eme ma ndị na-ebu ihe na-eri ihe na-enweta mkpụrụ mbụ.
A na-emepụta mycelium maka ịzụlite usoro ịzụ ahịa shitit na-ere na ahịa pụrụ iche na ụdị isi abụọ:
sawdust - Mgbochi mycelium na-adabere na ngwakọta sawdust-bran. Nke a bụ ihe zuru okè maka ozuzu mushrooms na mkpụrụ osisi homogeneous. Usoro nke mycelium na sawdust mkpụrụ maka akwa maturation nke shiitake bụ 5-7% nke mycelium nke mkpụrụ uka.
ọka - bu ihe nkedo nke ọka, nke bu ihe ndi ozo na-ere. Ozokwa, ọka na-eje ozi dị ka ezigbo ihe oriri na-edozi ahụ iji meziwanye akara nke mycelium. Maka ịzụlite nke shiitite n'ụzọ dị irè site na ụdị mycelium, ịkwesịrị itinye 2% nke ọka ndị ọrịa si na mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ.
Ndị ọkachamara n'ọhịa nke nsị ọka na-akwado ịṅụ cerec mycelium, ebe ọ bụ na ihe ọkụkụ dị otú a ga-echekwa ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ akụkụ ahụ, na ihe ọjọọ ọ bụla nke ngwaahịa ahụ nwere ike ịka mma na mkpụrụ ọka ahụ.
Ọ dị mkpa! Ebe ọ bụ na n'oge ochie, a maara amara na-emepụta ọgwụ antiparasitic dị mma nke ahịhịa shiitake, bụ nke a na-agwọ ọtụtụ ọrịa na ọbụna helminths.
Ihe ngwọta kachasị mma bụ ịzụta ngwungwu nke mycelium, nke dị kilogram 18, ụdị ọka, na nkwakọba ya n'ihu na akpa plastik nwere eriri pụrụ iche (200 grams). Nkwakọ ngwaahịa ga-ewere ọnọdụ na ụlọ dị ọcha na-enweghị ventilashion. Ị ga-achọkwa okpokoro na efere dị ọcha site na ncha nke a na-agbanye na ihe ngwọta nke whiteness. A ghaghị ime usoro maka nkesa mycelium n'ọtụtụ nkebi:
Nkeji 1 - mmịpụta nke akụkụ nke mkpụrụ ke pelvis. Akụkụ nke aka ya dị iche iche;
Nkeji 2 - backfilling mycelium na 200-gram òkè na akpa na snaps;
Nkeji nke 3 - mmepụta nke ụdị ntan si na akwụkwọ mposi (mgbakwunye nke square multi-layered na akụkụ nke 30 × 30 mm);
Nkeji 4 - akpa akụrụngwa na ntinye mycelium (tinye akpa ahụ n'ime mkpọchi, ma mechie ebe fọdụrụ na nkedo);
5 ogbo - na-ebu elu nke akpa ya na onye nlekota ya na-etinye ya na akpa ya na teepu.
Enwere ike ịchekwa billet ahụ (na nzacha) n'ime refrjiraeto ụlọ maka ọnwa isii, ọ dịkwa mma maka inoculation (imebi mkpụrụ na mycelium ọka).
A na-ewere ikike kachasị mma maka ịmepụta akpa akpa akwa plastic dị ka ụdị ọkọlọtọ, nakwa dịka ọkwa dị egwu nke 1 ruo 6 lita. Isi ihe maka imepụta ngwongwu dị otú ahụ ga-abụ polypropylene ma ọ bụ polyethylene dị elu (nke mere na ngwugwu a kwadebere nwere ike ịnagide ihe dị elu n'oge okpomọkụ n'oge usoro ọgwụgwọ nke mkpụrụ).
Ọ dị mkpa! Ọrịa sterilization nwere ike ịkpalite mmejọ na ntanetị, nke ga-emepụta ebe obibi na-egbu egbu na njikọta mycelium. Ya mere, ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa njikwa ọrụ nke sterilizer na oge ọrụ ahụ.
Nchịkọta na-enweghị ihe nzacha edozi ga-emechi ya na plọg-gauze na mgbanaka (a ghaghị ime ihe na-ekpo ọkụ na-eguzogide okpomọkụ ma nwee dayameta na gburugburu 40-60 mm). Na ire ere e nwekwara nchịkọta pụrụ iche maka na-eto eto mushrooms. Akụkụ nke ngwaahịa ndị a bụ ọnụnọ nke nzacha microporous pụrụ iche. Ya mere, mgbe ejiri mkpụrụ ahụ mejupụta akpa ahụ a kwadebere, akpa ahụ bụ akara nke ọma na mgbanwe gas na-ewere ọnọdụ naanị site na nzacha ndị a, a ghachapụrụ kpamkpam mkpa maka mgbanaka na nkpuchi.
Tupu ị na-amịpụta mycelium n'ime ihe ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa ka ịmechaa mkpụrụ ahụ a kwadebere n'ọdịnihu. E nwere ụzọ abụọ dị mkpa isi rụọ ọrụ a:
na-etinye mkpụrụ na-enweghị atụ n'ime akpa (nhazi nke blocks) na ịmalite ịrịa ụlọ. Usoro dị otú a chọrọ ijiri autoclave, ebe a na-etinye blocks na mkpụrụ ahụ (parameters maka autoclave: nrụgide vapo - 1-2 ik., Okpomọkụ - 120-126 ° C). Usoro ga-achọ ka obere oge - 2-3 awa.
ịmịnye mkpụrụ nke mkpụrụ tupu ịkwakọba na akpa (blocks). Iji mee ka mkpụrụ ahụ dị na-eji usoro a, ị ga-achọ nnukwu mbadamba 200-liter (arụnyere n'elu ọkụ na-akwado ndị na-eguzogide okpomọkụ), nke a ghaghị ịwụnye mkpụrụ ahụ, jupụta na mmiri esi mmiri ma sie ya n'ọkụ ruo ọtụtụ awa (4-5). Ọzọ, a ghaghị iwepu mkpụrụ ahụ na akpa dị ọcha ma kwe ka ajụkwa. Mgbe usoro ndị a gasịrị, ịkwesịrị ịbịakọta ngwakọta nke ọgwụ mgbochi na akpa. Ekwesiri ighota na site n'iji usoro ogwu mgbochi a eme ihe, a na-eji akpa plastic mee ihe dika igbe maka ime ihe di iche iche n'okpuru nrughari ya na ntinye nke ihe ndi ozo.
Ịkwado mkpụrụ na akpa
Mgbe ị na-eji usoro kpụ ọkụ n'ọnụ nke ịkụ anụ nke fungi ịmepụta mkpụrụ, buckwheat husks, grape ma ọ bụ apụl, ahịhịa, osikapa alaka, ahịhịa na ogbugbo osisi osisi, tinyere flax ma ọ bụ sunflower husk nwere ike iji.
Ọ dị mkpa! A pụghị iji akụkụ osisi coniferous mee ihe iji mepụta ngwakọta osisi, n'ihi na ha nwere nnukwu resin na phenolic, nke na-emetụta n'ụzọ dị njọ na mycelium.
55-90% nke uka nke ngwakọta maka ịgha mkpụrụ nke shitite mushrooms kwesịrị were sawdust nha 3-4 mm. Ngwunye nke obere nwere ike imerụ usoro mgbanwe gas, nke ga-eme ka ọganihu nke na-egbu oge kwụsị. A na-atụ aro ka ị gbakwunye osisi ibe na ibe ya na mkpụrụ iji mepụta nhazi usoro a. Ọtụtụ ndị na-eto eto na-eji ụyọkọ ọka wit eme ihe dị ka otu n'ime ihe ndị dị na shuga. Nke a ga-erite uru na usoro nke na-eto eto mushrooms naanị ma ọ bụrụ na ahịhịa na-eme ihe ndị a:
A ghaghị ikpokọta ahịhịa ọka na ihu igwe na-ekpo ọkụ na mmiri dị ala (ọkacha mma n'otu oge ahụ dịka owuwe ihe ubi);
Mkpụrụ ụra ga-abụrịrị enyi na gburugburu ebe obibi;
ọnụego ahịhịa ga-adaba n'usoro nke ọma, ebe ọ bụ na otu afọ nke nchekwa, ahịhịa na-eme ka ọdịnaya nke ihe bara uru (nitrogen) dị ọkara, ọ dịkwa mfe ntụgharị.
Tụlee ụzọ aghụghọ niile nke ndị na-eto eto na-eto eto dịka ogwu anu oporo, anụ ọhịa ọhịa, ndị na-egwu egwu, ọgba aghara n'ụlọ n'ụlọ.
Ọrụ dị mkpa na mkpụrụ ahụ na-arụ ọrụ site na uru ndị bara uru, bụ ndị na-ahụ maka ịchịkwa ọkwa nitrogen na ngwakọta, na-enye ọkwa pH chọrọ, na-eme ka mmepe nke mycelium mepụta, yana ibelata njupụta nke ngwakọta. Nri ihe oriri kwesịrị ịbụ site na 2% ruo 10% nke ngwugwu dum nke mkpụrụ.
Ihe ndị a na-adịghị agụnye ọka, ọka wit ma ọ bụ ọka ndị ọzọ ọka bali, ntụ ọka soy, nri dịgasị iche iche nke ihe oriri, yana nzu na gypsum. A na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe ndị dị na shititar mushrooms. Ihe kachasị mma ma dị irè bụ ihe ndị a:
41 kilogram nke osisi ndị e ji osisi sawdust tụrụ aro ya na pasent 8 nke ụrọ ọka. Ọzọkwa na mgbakwunye nke 25 lita mmiri na 1 n'arọ shuga;
ogbugbo na eriri (ruru 1: 1 ma ọ bụ 1: 2 n'ibu);
ogbugbo, ahihia na ahịhịa mkpụrụ (1: 1: 1);
osibisi osikapa na ahihia (4: 1).
Ị ma? N'afọ 2003, a chọtara nsị n'ime ihe nkedo akụrụngwa na-arụ ọrụ na Japan site na robot nchọpụta pụrụ iche.
Ihe bara uru bụ ịmepụta mkpụrụ nke ogbugbo na ntụ ọka wit sitere na ọka ma ọ bụ soy. Usoro nke ịkwadebe mkpụrụ maka inoculation mejupụtara nkeji atọ:
Iche. Na-enye gị ohere ime ka ngwakọta dịkwuo kọmpat, nke nke ọma na-emetụta mgbasa nke mycelium (nnukwu ebe nke mycelium na-esi ike na-esi ike imeri). Ọzọkwa, usoro ntụgharị bụ nke dị mkpa mgbe ọ na-eji ahịhịa ọhụrụ. N'ụlọ, ahịhịa ga-esi ruo ihe dị ka 5-10 cm.
Ịgwakọta Otu ihe dị mkpa dị mkpa iji guzobe mkpụrụ dị elu. Nke a ga-egosiputa arụmọrụ kachasị mma na ngwugwu dị iche iche nke nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ agbakwunyere.
Nhazi. Nke a na-eme ka o doo anya na e nwere ohere dị ndụ maka oghere dị ndụ nke shiitake, dịka na ebe dị egwu na ọ dị ala site n'iji gaa na isi obodo nke ebu na nje bacteria. Nhazi nke mkpụrụ ahụ na-esi na sterilization ma ọ bụ pasteurization ma na-emetụtakwa ya na e guzobere ero nsị. Ya mere, a na-akọwa n'ụzọ zuru oke usoro nlekọta ahụike.
A na-ele usoro a anya dị ka ihe kachasị mkpa, ya mere, ọ ga-achọ ka itinye uche na nkwadebe dị elu. Ebumnuche bụ isi nke usoro a bụ ịtinye ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka mycelium na-eri ihe na-edozi ihe. A ghaghị ịrụ ọrụ niile n'ime ihe ndị nwere nsogbu na-eji ihe dị ọcha edozi.
Tupu iguzozi nduzi, ọ dị mkpa ka ị na-amịpụta mycelium na mkpụrụ nke onye ọ bụla, nakwa na ị ga-ekpocha karama na nchịkọta nwere ngwọta pụrụ iche (mmanya 70% ma ọ bụ 10% sodium hypochlorite).
Usoro a ghaghị ime ngwa ngwa: meghee ngwugwu ahụ, debe mycelium, mechie ngwugwu ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke mycelium bụ ihe dị ka 2-6% nke ngụkọta ngosipụta zuru ezu. Ọ dị mkpa ịmepụta mycelium nke ọma iji mee ka usoro nke maturation dịwanye njọ. Ihe ngwọta kasịnụ bụ ịkwadebe tupu ịmalite na mkpụrụ ahụ ụdị ụdị nke etiti na usoro inoculation iji chọpụta mycelium na ya. Na mgbakwunye na ọka mycelium, ọ dịkwa ike iji otu sawdust ma ọ bụ mmiri mmiri. Ngwakọta a ga-egosi arụmọrụ kasị mma na njikọ dị iche iche dị iche iche. Ngwa ngwa ngwa sawdust bụ 6-7%.
Liquid mycelium na-edozi na ihe pụrụ iche (dịka ọmụmaatụ, mmanya wort). Ojiji nke ihe dị otú a ga-ekwe omume naanị n'ọnọdụ nke oke mkpụrụ nke mkpụrụ. Maka mmiri inoculation ọ dị mkpa iji onye nkesa pụrụ iche. Ọnụego ya bụ 20-45 ml kwa 2-4 n'arọ nke mkpụrụ.
Mgbe ị na-eme atụmatụ ụzọ ịchụ nta "ịchụ nta," chọpụta ihe ndị na-eri anụ (na-eto eto na May na mgbụsị akwụkwọ) na nsi, ma hụkwa otú ị nwere ike isi chọpụta nsị maka oriri na-eji usoro ndị a ma ama.
Oge nke a bu ihe mmepe nke kpochapu osisi site na nro na ntinye nke ihe ndi di mkpa maka erimeri nkpuru. Igwe ikuku nke kachasị elu n'ime ụlọ maka maturation nke mycelium bụ 25 Celsius. A na-etinye blocks ahụ n'elu elu elu (site na 20 cm n'elu elu ala) ma ọ bụ kwụsịtụrụ na ikuku maka oke flue gas ihapu. Ọ bụrụ na okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi ndị ahụ na-anọgide na-emepụta ihe karịrị 28 Celsius, mgbe ahụ, ihe gbasara nke nwere ike ịnweta mycelium na-aba ụba ọtụtụ oge n'ihi okike nke ọnọdụ kachasị mma maka ndụ ndụ nke asọmpi asọmpi (dịka ọmụmaatụ, ọkpụkpụ trichoderm ma ọ bụ neurospore).
N'ime oge a na-atụle, maturation kwesịrị ime n'ime ihe ndị mechiri emechi, ya mere, egosi mmiri dị oke mkpa. Enwere ike ịmegharị ihe maka ụbọchị 40-110, dabere na olu nke mịlelium ahụ, nke mejupụtara mkpụrụ ahụ na ihe ọjọọ.
Ị ma? E nwere otu klas nke anụ ndị na-eri anụ. Agụmakwụkwọ ndị a nwere ike ịtọ ọnyà n'elu mycelium (yiri mgbaaka ndị dị ka net net). Onye siri ike ka onye ahụ na-agbalị ịkwụsị ya, ngwa ngwa a na-agbanye mgbanaka ahụ. Usoro nke absorption nke organism na-achọghị na-ewe ihe 24 awa.
Usoro nke ịchịisi na-eduba ná mgbanwe nke agba nke mkpụrụ (ọ na-acha ọcha). Nke a bụ ihe na-acha ọcha mkpụrụ, nke na-esonyere ya site na ntinye nri. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye bloatings ọcha na ngọngọ ahụ. Usoro nchịkọta nke shiitake Ọzọ, ihe nkwụsị ahụ malitere iji nweta nchara nchara, nke na-egosi mmụba nke usoro nhazi ahụ. Ọtụtụ mgbe, na ụbọchị 40 ruo 60, ngọngọ niile na agba aja aja. Nke a bụ oge nke "agba aja aja" - ahụ dị njikere maka mkpụrụ osisi. A na-emepụta agba a n'ihi ọrụ nke enzyme pụrụ iche - polyphenol oxidase, nke a na-arụ ọrụ na ìhè dị ike na ọnụnọ oxygen.
A na-etokwa n'elu mkpụrụ ahụ ụdị nchekwa nke mycelium, nke na-egbochi microorganisms ịbanye na mkpụrụ na ihicha ya. Ya mere, n'oge oge ikpo ọkụ, ọ ga - ekwe omume ịmalite ìhè nke 7-9 (ìhè - 50-120 lux), iji mee ka ọdịdị nke primordia mee ngwa ngwa.
A na-ekewa ụtụtụ n'ọtụtụ akụkụ, nke ọbụla chọrọ ọnọdụ microclimate kpọmkwem:
Nkeji 1 - ịmepụta mkpụrụ osisi.N'ime oge a, ọ dị mkpa iji hụ na ikuku dị elu dị na 15-19 Celsius C, iji mee ka ikuku nke ụlọ ahụ dịkwuo mma, yana iji hụ na ìhè ọkụ na-ereghị aka maka 8-11 awa n'ụbọchị.
Nkeji 2 - mkpụrụ osisi. Mgbe primordies malitere ịmalite ịga akwụkwọ, ha na-adị mfe ịnweta mmetụta ọ bụla nke microclimate. Ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe okpomọkụ na ọkwa 21 ° C - maka nsogbu okpomọkụ ma ọ bụ 16 Celsius - maka ima ọchị (mkpa ịlele onye na-ere mycelium). Mmetụta kachasị elu n'oge oge nhazi mkpụrụ dị ihe dị ka 85%.
Nkeji nke 3 - fruiting. N'ime oge a, a na-emepụta ihe ndị na-arụsi ọrụ ike nke usoro otu mkpụrụ osisi shitit. Ngwurugwu ahụ na-eme ka a na-echebe protecticle, ya mere iru mmiri nwere ike belata 70%. Mgbe ịchọtachara nlezianya nke mkpụrụ osisi ahụ na paramọl nke ọka mushrooms, ọ dị mkpa iji mee ka owuwe ihe ubi mbụ. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ibudata iru mmiri nke ikuku, ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi ndị anakọtara n'ọnọdụ ndị dị otú a ga-adọrọ nke ọma ma chekwaa.
Nkeji 4 - oge mgbanwe. N'oge a, mycelium na-anakọta ihe oriri sitere na mkpụrụ. Iji mee ka usoro a dị ngwa, ọ dị mkpa ịwelite ntụgharị okpomọkụ na 19-27 ° C. Ọ dịkwa mkpa ịnọgide na - enwe ntụpọ dị ala - 50%, na-eme usoro nke ọma iji wepụ ihe fọdụrụnụ na mkpụrụ nke gara aga. Otu ihe dị mkpa n'ịhụ na ezi owuwe ihe ubi nke shithite mushrooms bụ nhazi nke ihe nkedo iji gbochie pests na oria. Enwere ihe dị ka ebili mmiri nke mkpụrụ osisi ripening site n'otu ngwugwu ọ bụla abụọ ruo izu atọ mgbe owuwe ihe ubi gara aga.
Ntucha nke shitit na-eme ka onye nwe obi ike na-edu ndú n'etiti usoro ndị dị ugbu a, na-enye ụmụ mmadu ngwaahịa dị mma maka ihe oriri ọka 65% nke mmepụta zuru ezu.
Usoro a kachasịkarị na mpaghara ebe enwere ihu igwe dị jụụ ma na-ekpo ọkụ, a na-etinyekwa "ubi" osisi na ebe echekwara ya na ìhè anyanwụ na ifufe.
Mgbe ị na-eke "ubi" ero na-adabere na ọnọdụ nke ndị ezinụlọ jiri osisi osisi osisi na-eto eto. Osisi ga-adị mma, dị ọcha, nwee okwute n'ozuzu ya na nnukwu isi. Mkpụrụ ihu mmiri dị oke mkpa. O kwesịrị ịdị na ọkwa nke 35-70%.
Ihe ngwọta kachasị mma bụ ịhọrọ kporo na dayameta nke 10-20 cm ma belata ha na 100-150 cm. Ọ dị mkpa ịhapụ ndị a "ihe ndị sitere n'okike" site na kọntaktị ọ bụla na ala ma ọ bụ mmepụta ahụ. Ntuziaka maka ịmalite mushrooms mushrooms n'ụzọ dịgasị iche na ụlọ nwere ụdị ndị a:
Ọ dị mkpa itinye ebe a na-edozi n'elu elu (tebụl ma ọ bụ trestle) maka ịkpụcha ntutu na ntutu egwu. Oghere ekwesịghị inwe nnukwu dayameta (2-3 cm ezu). Ọ dịkwa mkpa ijikwa omimi nke oghere na ọkwa 8-12 cm.
Mgbe e mepụtara oghere, n'oge kachasị dị mfe, usoro a kwesịrị ijupụta na sawdust ma ọ bụ ọka mycelium, nke a na-eji ihe ndị e ji osisi rụọ, na oghere ndị a ga-ejikọta na wax ma ọ bụ paraffin.
N'ọzọ ọzọ, ọ ga-adị mma ịtọba bran ahụ n'ime ụlọ ebe ọ ga-ekwe omume ịmepụta microclimate nkịtị maka uto nke mushrooms ripening - okpomọkụ nke 21-25 Celsius C na iru mmiri nke 75-80%. Ọ bụrụ na enweghị ohere na ebe ahụ, ọ dị mkpa ịchọta ebe dị n'oké ọhịa ma ọ bụ ụlọ ọ bụla na ìhè anyanwụ.
Ọgwụgwụ nke mycelium sitere na ọnwa isii ruo otu afọ na ọkara. Lelee ịkpụ maka mkpụrụ osisi shiitake nwere ike iji nlezianya nyochaa akụkụ obe (ebe a ga-enwe ebe ọcha), nakwa na ọ ga-enwe mmetụta dị nro na mkpirisi, ọ gaghị "agbanye";
Mepụta oghere na Kporo Iji mee ka usoro nke mkpụrụ osisi na-eto eto nwere ike ịbụ ụzọ ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ka ogbugba mbu nke fruiting dịkwuo mkpa, ọ dị mkpa iji mpempe akwụkwọ mycelium mikpuo na mmiri ma ọ bụ mmiri ya na enyemaka nke ngwaọrụ pụrụ iche. N'oge okpomọkụ, a ghaghị ime usoro a maka awa 9-20, na oyi - 1.5-3 ụbọchị. Oge nke mkpụrụ dị ihe dị ka izu 1-2, ọnụ ọgụgụ ebili mmiri na-ejedebe 2-3 ma ọ bụ karịa.
Ọ ga-adọrọ mmasị ịchọta nke ọka ndị na-eto eto na etiti Russia, Krasnodar Krai, Bashkiria, Rostov, Kaliningrad, Volgograd, Leningrad na Voronezh mpaghara.
Ndị ọkachamara na-atụ aro iji kpuchie alaka n'etiti ebili mmiri nke mkpụrụ osisi (n'oge ezumike) na ihe nchebe pụrụ iche nke ga-ebufe ìhè na ikuku. Ihe bụ isi ebumnuche a bụ iji mee ka usoro okpomọkụ dị elu dị elu (okpomọkụ - 16-22 Celsius C), nakwa iji hụ na iru mmiri dị 20-40%. Mgbe ọnwa 1-3 gasịrị, a ghaghị tinye mmiri ahụ na mmiri ọzọ ma mee ka ọ rụọ ọrụ usoro mkpụrụ osisi ahụ. Iji kwuo na "mkpụrụ" ga-ekwe omume na-achịkwa ndị na - eto eto na - ahụmahụ - nchịkọta nke mkpụrụ osisi niile kwesịrị ịdị ihe dịka 17-22% nke oke osisi. Mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ịdịgide site na afọ 2 ruo 6.
Ntucha ahihia nke Shiitake bu usoro di omimi na ihe omuma nke ga - ekwe ka oru ndi oru nhazi osisi. Ọdịbendị a na-emepụta ihe ọ bụghị nanị na-eme ka ụdị nri dịgasị iche, ma na-enye aka inweta ihe oriri dị mkpa iji nweta ezi nsogbu nke anụ ahụ n'ozuzu ma na-egbochi imeju, obi, na akụrụ na obere oge na mgbalị.